Shidaal yarida oo saamayn ku yeeshay Uganda iyo Kenya – Idil News
Shidaal yarida oo saamayn ku yeeshay Uganda iyo Kenya
Posted By: Idil News Staff January 18, 2022
Madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni wiil uu dhalay General Muhoozi Kainerugaba ayaa fariin u diray madaxweyne Uhuru Kenyatta iyadoo ay jirto xiisad u dhexeysa labada dal ee ku saabsan xuduudka Malaba.
General Kainerugaba oo ku taagan mawqif aan leexleexad lahayn ayaa waxa uu soo dhigay baraha bulshada isagoo ku dhawaaqay in aanay cidina jebin karin xidhiidhka labada dal Kenya iyo Uganda
Wiilka uu dhalay Madaxweynaha Uganda, ee ah Hogaamiyaha Qarsoon ee dalka Uganda
ayaa dhowr jeer oo hore, ammaanay Uhuru oo ku aaddan hoggaamintiisa, isagoo ku tilmaamay mid ka mid ah madaxweynayaashii ugu waaweynaa ee Afrika soo mara.
“Walaalkeyga weyn, Mudane Madaxweyne Uhuru Kenyatta, waa mid ka mid ah Madaxweynayaashii ugu waaweynaa ee Afrika soo mara, waa caqli badan, is-hoosaysiin iyo soo jiidasho badan. Madaxweyne Uhuru ha noolaado!!” ayuu hore u sheegay.
Dalka Uganda waxaa soo food saartay shidaal yari ka dib markii wadayaasha baabuurta Kenya ay diideen inay bixiyaan 3,000 oo shilinka Kenya ah si ay ugu galaan imtixaanka qasabka ah ee xuduudka- amarkaas oo uu bixiyay Museveni. Taasi
waxay keentay in wadayaasha gaadiidka xamuulka qaada ay sameeyaan shaqo joojin badan oo arrintan la xiriirta.
Xiisadda labada dhinac ka taagan xuduudka ayaa keentay in gaadiidku isku buuqaan oo ku saabsan sheekada tijaabada ah .
Intii lagu jiray usbuuca dhamaadkii, Wasaaradda Tamarta ee Uganda, bayaan ay soo saartay, waxay ballan ku qaadday inay xallin doonto arrinta oo ay nadiifinayso barta xadka si loogu oggolaado socodka bilaashka ah ee xamuulka qaada shidaalka.
“Markii la nadiifiyo maalmo gudahood, saadka iyo qiimuhu sidiisii ​​ayay ku soo noqonayaan, loomana baahna in dadweynuhu argagaxaan.